A ga-ewu nnukwu cannery na Russia na mpaghara Volgograd - magazin "Potato System"
VTB mepere akara kredit maka Ruspole Brands Group of Companies na ego nke 2,5 ijeri rubles maka oge nke afọ asatọ maka iwu nke obere cannery na Russia maka mmepụta nke ngwaahịa n'okpuru akara Uncle Vanya. A na-enweta ego na usoro nkwado dị n'okpuru usoro atumatu jikọrọ ya na Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
A na-arụ ọrụ osisi ọhụrụ na Volzhsky, obodo satellite nke Volgograd. Isi ọrụ ya ga-abụ mmepụta ngwaahịa ahịpụtara site na akwụkwọ nri ọhụrụ na mkpụrụ osisi toro na ngalaba ụlọ ọrụ ahụ na mpaghara ahụ. The imewe ike bụ 40 nde Mkpọ kwa afọ, na agwaogwa ga-agụnye ihe 100 ihe. Ke akpa ogbo, na enterprise ga-emepụta ihe karịrị 500 ọrụ.
"Osisi ohuru nke Ruspole Brands Group of Companies bu otu n'ime oru ntinye ego di egwu nke emeputara na 2020 ya na ntinye aka anyi n'okpuru mmemme nke Ministry of Agriculture. N'oge a, VTB emechiela ihe karịrị 3,5 puku nkwekọrịta n'okpuru mmemme maka ihe ruru ijeri 400 rubles. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke olu a bụ maka ebumnuche ego. Mbelata nke a na-enye ndị ọrụ ugbo ohere ibelata mmefu na mmejuputa ọrụ ha ma na-aga n'ihu na mmepe na-adigide, na-enye ndị na-azụ ahịa ngwaahịa dị elu ma nke ụlọ ma na mba ofesi, "Ruslan Eremenko, Onye isi nke ngalaba Corpolọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mpaghara mpaghara - Onye isi oche nke VTB kwuru.
Tigran Telunts, onye nwe Ruspole Brands Group kwuru, sị, "Site na nkwado ego nke VTB, ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị ga-adị njikere ire ngwaahịa mbụ na nkeji nke anọ nke 4, nke ga-eme ka mmụba ahịa kwa afọ nke Uncle Vanya dịkarịa ala 2021% kwa afọ."
Tags: Mpaghara Volgogradụlọ ọrụ mmepụta ihe canningnhazi nri
Rosselkhozbank na "Magnit" ga-akwado ndị ọrụ ugbo
Interregional ngosi "Agro-ulo oru mgbagwoju" ga-ẹkenịmde ke ufọt ufọt March na Volgograd
Owuwe ihe ubi nke akwụkwọ nri agwụla na mpaghara Volgograd
Ewu ulo anumanu nke emechara na Krasnodar Territory
Emebere oru ngo ego maka nhazi na inine oyi nke ruru 545 nde rubles na Volgograd